Cunto Kariyihii Madaxweynaha Soomaaliya Oo Dhalasho Ahaan Ka Soo Jeeday Somaliland Oo Ku Guulaystay Kursi Xildhibaanimo Lana Aamusiin Kari Waayay Oohin Markii Natiijada Lagu Dhawaaqay, Magaciisa Iyo Nuxurka Sheekadan – Tusmoonline.com
Cunto Kariyihii Madaxweynaha Soomaaliya Oo Dhalasho Ahaan Ka Soo Jeeday Somaliland Oo Ku Guulaystay Kursi Xildhibaanimo Lana Aamusiin Kari Waayay Oohin Markii Natiijada Lagu Dhawaaqay, Magaciisa Iyo Nuxurka Sheekadan
Wararka	December 26, 2016	94	Like
Muqdisho (TUS/FOORE)- Madaxii cunto karinta ama kuuggii ugu waynaa kuugta cunto kariyayaasha Madaxtooyada Maamulka Muqdisho ee Villa Soomaaliya oo dhalasho ahaan ka soo jeeday Somaliland gaar ahaan reer Hargeysa ayaa shalay ku soo baxay loona doortay Xildhibaan Aqalka Hoose ka mid noqon doona doorashada Aqalka hoose ee Soomaaliya oo Muqdisho ka qabsoontay kaasi oo markii natiijada lagu dhawaaqay in uu kursigaasi ku guulaystay la aamusiin kari waayay oo oohin laba af yeedhay.
Cabdiraxmaan Iidaan Yoonis ayaa mar kali ah kursiga ka doobay oo oohin miciinsaday balse ay in badan isku dayeen in ay aamusiiyaan kadib markii uu la qiirooday sida uu ugu guulaystay Xildhibaanimo uu ka qabto aqalka hoose ee Maamulka Muqdisho shanta sano ee soo socota kaasi oo sheegay mar uu warbaahinta la hadlay in uu u qaadan waayay in uu guushaasi keenayo balse uu mar walba aaminsanaa in dadkiisu u codaynayaan.
Cabdiraxmaan Iidaan Yoonis oo ahaa Madaxdii cunto karinta ama shiifkii ugu waynaa kuugta cuntada u karisa Madaxweynaha Maamulka Soomaaliya ee Muqdishi Xasan Sheekh Maxamuud oo sida aan sheegnay dhalasho ahaan ka soo jeeday Somaliland ayaa ahaa nin ku xoogsada farsamadiisa cunto karineed balse ugu dambayn noqonaya xildhibaan ka mid ah xildhibaanada dhalasho ahaan ka soo jeeda Somaliland ee maamulkaasi Soomaaliya ka mid noqonaya.
Cabdiraxmaan Iidaan Yoonis oo shalay waraysi gaar ah siiyey idaacadda Gooj Joog ee Magaalada Muqdisho ayaa isaga oo dareenkiisa cabbiraya waxa uu yidhi: “Wallaahi walaal aniga bulshadayda ayaa I wadata. Bulshadaydaa codka iigu deeqday iyagaan waydiistay waxa weeyaan meeshan dawladina cid ima siin cidna cid ma dooran. Dadkaygu markii ay ku qanceen wixii aan is lahaa waad u qaban kartaa ayay aniga igu doorteen. Waa run anigu dawladda waan u shaqeeyaa, laakiin aniga dawlad baad u shaqaysaa cod la iguma siin ee bulshadayda ayaa I dooratay. Dawladi codkayga imay siin. Ma ihi nin dawladi ay dabada ka soo riixday ma ihi” ayuu yidhi Cabdiraxmaan Iidaan Yoonis.